बिनयी त्रिबेणीमा एकैदिन १८ जना संक्रमित पुष्टि - MONGOL KHABAR
बिनयी त्रिबेणीमा एकैदिन १८ जना संक्रमित पुष्टि
कावासोती । भदौं ५ शुक्रवार, नवलपुरको बिनयी त्रिबेणीमा समुदायस्तरमा एकैपटक आज एकैदिन १८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । थप १८ जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नवलपुरमा संक्रमण पुष्टि भएको कुल संख्या ३ सय ८१ पुगेको छ ।
बिनयी त्रिबेणीका दक्षिणतर्फ भारतसँग निकट सिमावर्ती २ वटा वडाका १३ पुरुष र ५ जना महिला गरी १८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसअघि १ जना स्थानीय मासु पसल गर्ने महिला र एक जना अर्का समुदायकै पुरुषमा संक्रमण देखिए पछि उनीहरुको समेत कन्ट्याक ट्रेसिङका आधारमा संकलन गरी परिक्षणका लागी गण्डकी प्रदेश पोखरा पठाईएका स्वाव मध्ये १८ जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले मंगोल खबरलाई जनाएको छ ।
प्रदेश क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा बिनयी त्रिबेणीको वडा नं. ६ का १० जना पुरुष र ३ जना महिला तथा वडा नं. ७ का ३ जना पुरुष र २ जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा दिउँसो पौने १ बजे जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संक्रमितहरु २४ देखी ६२ बर्ष उमेर समुह भित्रका छन् । यो सँगै बिनयी त्रिबेणीमा मात्रै समुदायस्तरका २३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस अघि गैंडाकोटका १ र कावासोतीका एक जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो । नवलपुरमा कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्कनेको संख्या ३ सय ३० रहेको छ ।